Ngequbuliso uKati onothando - Iikati General Info
Utshintsho kwiUkuziphatha kwekatiUngakhathazeka umnini wesilwanyana. Olunye undwendwe libuza ukuba kutheni ikati yalo ivele yathandana.
iinombolo zemodeli yomatshini wokuthunga weediliya
Abaveleli Buza imibuzo malunga nokuthandana ngequbuliso kwiikati
Ikati ngesiquphe Inothando
Mholweni. Ikati yam yabasetyhini yajika nje yaba lishumi elinesihlanu kwaye yayizimeleyo kakhulu kubo bonke ubomi bayo. Wayengenguye ikati ethandekayo enjeyaikati eyindodaNdandinaphambi kwakhe. Wayethanda ukuhlala yedwa, wayengenguye ikati nangayiphi na indlela kwaye akazange alale kwigumbi elinye nam. Kunyaka ophelileyo, ebesiza, ehleli esofeni ecaleni kwam. Ngokukhawuleza, uyandikhathaza ngakumbi kwaye uyavuya xa endibona ndibuya ekhaya emva kokuba eyedwa imini yonke. Iphantse yangathi ivukile kwaye ngoku iyikati ethandekayo yedeveli bendisoloko ndinqwenela ukuba ngebeyiyo. Ndiyazi ukuba abantu basetyhini bazimele ngakumbi kunamadoda. Ngaba lo ngumqondiso nje wokwaluphala, okanye kufanele ukuba ndikhathazeke? Enkosi. ~~ Tara
Inzala eyahlukileyo yeekati
Amakati zizidalwa ezingaqhelekanga. Ndinekati yaseSiamese eyamcaphukela umyeni wam okoko wamhlambayo xa wayeneveki ezilishumi elinambini ezelwe. Ndithembe ukuba wayedinga enye! Uneminyaka elishumi elinesihlanu ngoku, kwaye ngequbuliso uthathe isigqibo sokuba uyamthanda. Uya kukhwela ethangeni lakhe kwaye acoce kwaye amhlikihle kuye. Ndiyaqonda ukuba kwamthatha iminyaka elishumi elinesihlanu ukumxolela.
Andizukukhathazeka ngekati yakho ngaphandle kokuba ibonisa enyeiimpawu ezingaqhelekanga. Izinto ekufuneka zibukelwe ezinokubonisa ukugula ziya kubandakanya:
Guqula kwiimikhwa yebhokisi yenkunkuma
Njengamaxesha onke, ukuba ukrokrela ukuba uhambo oluya kugqirha wezilwanyana lunokuba lolungeleleneyo, kuya kufuneka wenze idinga nogqirha wezilwanyana. Ngaphandle koko, bonwabele indlela amnandi ngayo. Kulungile ukuba uthandwa ngakumbi.
ndingazinikela phi iiglasi zamehlo ezisetyenzisiweyo
Ukufa Kwinkcubeko Kuhlabathi Kwehlabathi Ukucoca Iitips Malunga Gluten Inkcubeko Tattoos Seswekile Diet
iziselo ezilula zoku-odola kwi-bar
Amagama amantombazana awodwa aqala ngo-e
ezona ndawo zokuthengela ulutsha
ungayinika kangaphi i-aspirin yenja
ungenisa njani umkhwekazi wakho ebhedini?
kuthatha iiwati ezingakanani ukuqhuba indlu
indlela yokulahla inkwethu yekati